Uhie Flashlight, Dọl Ngwurugwu Light, Ada Headlamp N'obu - Liveolight.com
Egwurugwu Nchapu ọkụ
Ọkụ Isi Mmiri
Onyinye & Nkwalite Ume
Ogwe okwu okwu Bluetooth
130 Lumens 2AAA Flashlight Batteries na Penclip
Na-eji akara uhie CREE XP-E2 R2, nke kachasị elu ruo 130 lumens. Kwadoro site na 2xAAA batrị alkaline, na 3 ...
2XCR123A IPX7 500 Lumens Na-achịkwa Mpụpụ Na-achịkwa
♥ Njikwa na-eme ka ihe mgbagwoju anya na-eme ka ọ dịrị gị mfe igbanwe ụdị 6. ♥ Na-eji CREE XM-L2 U2 LED, ...
Obere Aluminom 1AAA Batrị Ntanye mbube na Keychain
♥ Pịgharịa isi ka ị gbasaa site na defocusing naanị otu aka. ♥ Na-eji CREE MLE LED, ...
1000 Lumens 9xAA Batrị CREE LED Zoom Flashlight
♥ Mee isi ka ịbịgharịa site na defocusing na ilekwasị anya. ♥ Na-eji CREE XM-L2 T6 LED, ya na mmepụta kachasị elu ...
IPX8 Batrị 4AA Na-enweghị Mmiri CREE LED 10m Diving Flashlight
♥ IPX8 mmiri na-apụtaghị na ị nwere ike ịdaba na njiri nke 10 mita na akara ngosi. ♥ Na-eji CREE ...
Batrị Aluminom 2AA Aluminum LED Flashlight na Penclip
♥ Mgbapu nkwado nkwado, na ihe nakawa aha. ♥ Kwadoro site na 2xAA batrị alkaline, na oge 7 awa oge. ♥ akwa siri ...
Kpọtụrụ anyị Maka Ahịa Ahịa, Vidiyo, Images wdg. Ọ bụrụ na Ị Nwere Ajụjụ ọ bụla, biko mee ka anyị mata. Anyị ga-aza gị n'ime awa 12
STARLITE bụ ụlọ ọrụ HANDS-ON LIGHTING, nke anyị mere na Jan 2009. Anyị na-amụta site na ime ma na-emeziwanyewanye. N'ihi ya, anyị anaghị akwụsị iche echiche banyere ihe ndị ahịa anyị chọrọ. Anyị na-eme ihe ọkụ ọkụ dị iche iche. Anyị na-elekwasị anya na imeziwanye ma meziwanye ngwaahịa ndị ahụ site n'iji ya eme ihe n'ezie. Anyị na-eche gbasara ahụmahụ ndị ọkachamara na mmetụta maka ndị ọkụ ọkụ, ndị nche, ndị dinta, ndị ọkụ azụ, ndị na-ahụ n'èzí, ndị na-egwu egwuregwu, ọrụ ịma ụlọikwuu na ubi. Anyị na-eche banyere ọhụụ niile nke ụwa na-eduga na echiche ọhụrụ ...
Mgbawa kachasị ike bụ SFL-A176N
EKWERE NDỊ NA-ECHICHE (1)
Kedu ihe mere onye ọ bụla ji eji flashlight?
Gịnị mere ịzụta isi oche?
Mpịlị na-eduzi ya
Mee ka ị nweta akara ngosi kachasị mma mgbe ịchọrọ
Ntube Nchekwa Ntu
Okwu Mmalite na Batrị
300 lumens 3 modes car charged flashlights rechargable popular
Nkọwa dị iche Mpempe: Mpị ọkụ ọkụ Isi Iyi Mmiri: Iyi Mmiri Iyi Mmiri: IGBỌ XP-G2 R5 * 1 Mpụpụ Ụdị: Mpịpị Na-agbapụta Gburugburu: Zhejiang, China (Mainland) Aha aha: Ụdị batrị a na-akpọghachi akpọghachi: 1658 Li-ion 16340mAh Usage: Ike Iyi Ike Nsogbu: Batrị Rechargeable Period (h): ...
1500 lumens adabere na ndị ọkachamara na ndị dị elu
Nkọwa ngwa ngwa Ebe aha: Zhejiang, China (Mainland) Aha aha: akara igwe na-eduzi ihe ngosi Mpịakọta: SFL-A176N ike gụrụ flashlight Aha aha: ike nkịtị na-edu flashlight Batrị type: 3 * D Power output: 13.5W Color Temp: 6400K Ihe dị egwu: 100% -1500lm 50% -700lm 25% -350lm Flash-1500lm SOS-1500lm Beam Anya: 100% -370m 50% -244m 25% -86m Nkwụsị ọgụ: ...
Na-eji akara uhie CREE XP-E2 R2, nke kachasị elu ruo 130 lumens. Kwadoro site na 2xAAA batrị alkaline, na oge 3 awa oge. A na-enweta ya na ụdị 6 dị iche iche ma ị nwekwara ike ịhazi ụcha kachasị amasị gị. Mpempe akwụkwọ siri ike, ígwè na nhazi electrophoretic, dabara n'ụzọ ị dị. 130 di egwu ...
Guzosie Ike na 2009, STARLITE FLASHLIGHT LIMITED bụ onye na-emepụta ma na-azụ ahịa pụrụ iche na nyocha, mmepe na mmepụta nke ọkụ ọkụ. Ngwaahịa anyị niile na-agbaso ụkpụrụ omume ụwa ma nwee ekele dị ukwuu n'ọtụtụ ahịa dịgasị iche iche n'ụwa nile.
1 Suite, Ụlọ Nzuzi No9, No.215 Yaohua Rd, Pudong, Shanghai, China
2009 ® STARLITE. Ikike niile echekwabara.